पुण्य गौतमले ६० रुपैयामा भात खादै यस्तो सम्म भन्न भ्याए, देख्ने सब हे'रेको हेरैकै (हेर्नुहोस् भिडियो) -
Homeसमाचारपुण्य गौतमले ६० रुपैयामा भात खादै यस्तो सम्म भन्न भ्याए, देख्ने सब हे’रेको हेरैकै (हेर्नुहोस् भिडियो)
February 23, 2021 admin समाचार 1444
सानैदेखि राजनीतिमा होमि’एका ब्यक्ति हुन् गौतम । बाराको निज’गढमा जन्मिएका उनले राजनीतिको माध्य’मबाटै देश सेवा गर्ने उच्च भावनाबाट कम्यु’निष्ट राजनीतिमा ३० बर्ष बिताएका छन् । जिन्दगीको धेरैजसो उर्जा राजनीतिमा खर्चिएका गौतम चिरप’रिचित कवि, साहित्यकार एवं पत्रकार समेत हुन् । उनले भोलिका दिन’हरुमा पनि देश र जनताको पक्षमा काम गरिरहने बताएका छन् ।
उनि भन्छन सानैमा राजनी’तिमा हेलिएको मलाई मम’तामयी आमाले टु,हुरो बनाएर गएपछी मेरो भाग्य नै फु,टे जस्तो भयो । उनि थप्छन आज’पनि खल्तीमा पैसा नहुँदा गाडी चढ्न नसकि भो,कैभोकै हिडेको छु तर देशभक्ति र स्वाभिमानलाई झुक्न दिएको छैन । उनले भा,वुक हुँदै भने अहिले म रि,नमा चु,र्लुम्म डु,बेको छु मनको ब,ह कहाँ पो,खौं । – इताजा खबरबाट
“यदि तपाईँ लामो र स्वस्थ जी’वन चाहनुहुन्छ भने मीठो निद्रामा समय खर्च गर्नुहोस्,” निन्द्रा विशेषज्ञ म्याथ्यु वाकर भन्छन्। युनिभर्सिटी अफ क्यालि’फोर्निया, बर्कलीका मनोविज्ञान प्राध्या’पक वाकरले थुप्रै अध्ययनमा सहभागी भएका लाखौँ मनिसको तथ्याङ्क अध्ययन गरेका छन्।
“निद्रा सबैभन्दा प्रजाता’न्त्रिक र निःशुल्क उपलब्ध सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हो,” उनी भन्छन्। पचास वर्षको अध्ययन एवम् अनुसन्धा’नपछि अबको विषय ‘निद्राले हामीलाई के गर्छ’ भन्ने होइन कि ‘निद्राले फाइदा नगर्ने केही छ कि’ भन्नेमा के’न्द्रित हुन थालेको छ।
निद्राले हा’मीलाई के गर्छ?
अहिलेसम्म अध्ययन’कर्ताहरूले निद्राले फाइदा नगर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा पत्ता लगा’उन सकेका छैनन्। विज्ञानले अहिलेसम्म पत्ता लगाएको कुरो भनेको निद्राको अभा’वमा हाम्रो शरीर र मस्तिष्कमा नाटकीय असर गर्छ भन्ने हो। विकसित मुलुकमा मानिस’हरूको ज्यान लिइरहेको अल्जाइमर्स, क्यान्सर, मुटु र धमनीसम्बन्धी रोगहरू, मोटोपन, डि’प्रेशन, चिन्ता र देहत्यागको पनि निद्राको अभा’वसँग केही न केही सम्बन्ध पाइएको छ।
निदाएको अवस्था’मा मानव शरीरका सबै प्रणाली’हरूको ‘नवीकरण’ हुन्छ। निद्रा पुगेन भने तिनमा असर पर्छ। तर निद्रा भने प्राकृतिक हुनुपर्छ। निद्राको औ’षधिले क्यान्सर, सङ्क्र’मण र मृत्युको सम्भावना बढाउँछ। निद्रा हाम्रो लागि अत्या’वश्यक छ। तर विकसित मुलुकको तथ्याङ्क हेर्दा हिजोआज मानिसहरू कम सुत्न थालेको स्पष्ट हुन्छ। हिजोआज मानि’सहरू एक सय वर्षअघिको भन्दा औसतमा कम सुत्छन्।
दैनिक सा’तदेखि नौ घण्टा सुत्दा पर्याप्त निद्रा पुग्छ। पर्याप्त सुत्नु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य’का लागि मात्रै होइन, रचनात्मकता र सृर्जनशीलताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। सात घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिस’हरूको शरीर र मस्तिष्कमा असर हुन थाल्छ र रोगको प्रति’रोध गर्ने क्षम’तामा असर गर्छ।
चिहान ख’न्ने झाक्रीले फेरी देखाए मध्यरातमा अर्को अ’नौठो दृश्य, केराको बोट का’टेर किन यस्तो गरे ? (भिडियो सहित)
March 6, 2021 admin समाचार 1437
कुरा सुन्दा फिल्म अथवा मनो’गडन्ते हावा कुरा जस्तो लागेपनी बा’स्तबमै मोरङको बेलबारिमा कसैले सोच्नै नसकिने घ’टना घटेको छ । एका_एक सबै गाउँले बिरामी पर्दै आ’त्मा पसेर दुख दिन थालेपछि गाउँ नै चि’न्तामा परेको छ ।
January 22, 2021 admin समाचार 2305
October 4, 2020 admin समाचार 5780
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160383)